बेलारुस मा आराम साँच्चै अविस्मरणीय छ। यहाँ, सबैलाई के उहाँले एक उत्कृष्ट छुट्टी संग सम्बन्धित छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। बेलारुस सक्रिय र शान्त विश्राम लागि आदर्श छ। र लगभग हरेक रिसोर्टमा विकल्प दर्जनौँ प्रदान गर्दछ। यो असंख्य पोखरी र नदी, शैक्षिक यात्राहरु र घाम समुद्र तट को एक राष्ट्र हो।
केही वर्ष पहिले सम्म, गर्न स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र आगंतुकों Belarusians विशेष थिए। आज तथापि, सबै नाटकीय परिवर्तन भएको छ। पर्यटकहरु यो राम्रो आफ्नो छुट्टी खर्च गर्न युरोप सम्म विदेश यात्रा गर्न आवश्यक छैन भनेर महसुस गर्न थाले। रूस र यूक्रेनियन, को Balts र डंडे, जर्मन र अन्य देशहरूको नागरिकहरु को बेलारूसी स्वास्थ्य रिसोर्ट ठूलो चासो देखाउन छन्। यो किन छ? यो ईयू संग बराबरीको छ जो उत्कृष्ट सेवा, को परिणाम छ, तर मूल्यहरु अधिक किफायती छन्। आज हामी बेलारुस को सबैभन्दा लोकप्रिय स्वास्थ्य रिसोर्ट्स, तपाईंले आफ्नो अर्को छुट्टी योजना अनुमति दिन्छ मूल्याङ्कन जो हेर्न चाहन्छु।
मुख्य चिकित्सकीय कारक
यो देश आफ्नो अनुकूल जलवायु लागि प्रसिद्ध छ, र प्रकृति को चमत्कार स्वास्थ्य सुविधा को नेटवर्क को निर्माण को लागि यो एउटा ठूलो ठाउँ गरेका छन्। यसबाहेक, उच्च मांग आधुनिक रिसोर्ट्स अत्यधिक प्राविधिक आधुनिक उपकरण संग सुसज्जित भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेको छ। मूल्यहरु एकदम लोकतान्त्रिक हो आराम गर्न। यस मामला मा, तपाईं कल्याण उपचार को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव गरिनेछ।
बेलारुस को स्वास्थ्य रिसोर्ट्स, जो को दर्जा तल, देखाइएको छ - तिनीहरूले Untouched जंगल, खनिज पानीका मुहानहरू र राम्ररी विकास पर्यटक पूर्वाधार को एक अद्वितीय सफा हावा संग वास्तविक रिजर्व छन्।
1 गर्नुभएको अस्पताल "बग"
हरेक पर्यटक दृश्य त आत्मपुरक को स्थानहरूको वितरण हो, अलि फरक छ। हामी स्थानहरू अस्पताल बेलारुस व्यवस्था गरेर समीक्षामा आधारित पर्यटक बहुमत, को विचार मा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछन्। तिनीहरूले धेरै धेरै भएकोले दर्जा, सबै रिसोर्ट्स विचार गर्न सक्दैन।
तसर्थ, अस्पताल "बग" को तेजस्वी किनारा मा, Sosnovy Bor को पर्चा मा स्थित छ Mukhavets नदी। मास्को - केवल2किमी राजमार्ग ब्रेस्ट देखि यो अलग रूपमा धेरै सुविधाजनक, आफ्नो स्थान छ। हरेक पर्यटक त्यहाँ स्वागत हुनेछ, र ध्यान दिएर कर्मचारी कुनै पनि रोग को छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त। के ठीक "बग" बेलारुस अन्य रिसोर्ट्स उच्च छ? यो सेवा को एक विशाल विकल्प संग सबै भन्दा ठूलो वर्ष राउन्ड स्वास्थ्य रिसोर्ट छ भन्ने कारण लागि पूर्वसूचना दर। अमूल्य धन रिसोर्ट - खनिज पानी, 1260 भन्दा बढी मीटर को एक गहिराई संग, यसको आफ्नै वेल्स देखि झिकिएको छ जो निको।
मूल्य डबल मानक प्रति - प्रति दिन 1256 rubles। कठिन समीक्षा सूची पनि गर्न। अपवाद बिना, तिनीहरूले अनुपम सेवा र उपचार को अचम्मको गुणस्तर जोड।
2. अस्पताल "Belorusochka"
गरेको बेलारुस को स्वास्थ्य रिसोर्ट्स हेर्न जारी गरौं। यो अद्वितीय जटिल बिना सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट्स को र्याङ्किङ्ग कल्पना गर्न सकिन्छ। यो पाइन वन बीच मिन्स्क क्षेत्र इलाका मा स्थित छ। यहाँ balneotherapy, teplogryazelechenie, inhalations र चिकित्सकीय मालिश अभ्यास छ। उपचार र आराम को लागत - प्रति रात 1060 rubles प्रति कोठा।
समीक्षा द्वारा न्याय, यो यसको राम्रो चिकित्सा सुविधा लागि प्रसिद्ध छ। डाक्टर, हरेक पर्यटक धेरै संवेदनशील छन् उहाँलाई लागि व्यक्तिगत अवस्था सिर्जना गर्नुहोस्।
3. अस्पताल "Ruzhansky"
यो को क्षेत्र मा स्थित छ ब्रेस्ट क्षेत्र। साँच्चै अद्वितीय स्वास्थ्य रिसोर्ट, हजारौं को स्वास्थ्य सुधार गर्न अनुमति जो। बेलारुस, हामी संधै पहिलो स्थान मा सामना sanatoriums को उपचार को लागि दर्जा विचार किन, छ। यो पहिलो नजर कुराहरू मा असंगत जोडती। यो एक हात मा, आरामदायक, अद्वितीय उपकरण र आधुनिक आंतरिक छ र हाम्रो ग्रह को लगभग Untouched कुनामा समय खर्च को संभावना - अन्य मा।
सफा हावा, आफ्नै खनिज वसन्त र सम्पूर्ण सीआईएस चिकित्सा हेरविचार मा सबै भन्दा राम्रो - यो सबै रिसोर्ट को लोकप्रियता हरेक वर्ष बढ्छ। तर, स्वास्थ्य केन्द्र मात्र 283 सिट देखिन्छ। तसर्थ, प्याकेज टुर अग्रिम हेरविचार गर्नुपर्छ। मुख्य प्रोफाइल endocrine, स्नायु र पाचन प्रणाली को उपचार हो।
4 "सेतो टावर"
हामी समीक्षा द्वारा बेलारुस को दर्जा रिसोर्ट्स विचार भने, प्राय तपाईं यस विशेष आश्चर्यजनक रिसोर्ट्स सन्दर्भहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो र सफा क्षेत्र द्वारा आकर्षित पर्यटक मुख्य ध्यान। कुनै कम्पनीहरु, केवल उमेर-पुराना रूखहरू र मौन छन्। म बारेमा पन्ध्र वर्ष पहिले अस्पताल काम गर्न थालिन्, तर मानिसहरूले सयौं यहाँ आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्षम थिए।
पहिलो समीक्षा बेलारूसी प्रकृति को सुन्दरता भन्छन्। यहाँ तपाईं कहाँ सबै समस्या wayside जान अर्को संसारमा जस्तै आफैलाई पाउनुहुनेछ। उत्कृष्ट सहज कोठा सौहार्द बढाउँछ। कर्मचारीहरु को, मैत्री अनुकूल र सहयोगी मनोवृत्ति हलिडे captivates। अन्तमा, स्वास्थ्य हेरविचार। यो सिर्फ शीर्ष मा छ। स्वास्थ्य रिसोर्ट को musculoskeletal सिस्टम को रोगहरु उपचार मा माहिर।
5 अस्पताल "Krynica"
यो उपचार संग बेलारुस को सबै भन्दा राम्रो स्वास्थ्य रिसोर्ट्स चयन गर्न धेरै गाह्रो छ। दर्जा विभिन्न मापदण्डमा आधारित गर्न सकिन्छ। तर, आज हामी दुई मुख्य छ - र यो उपचार गुणस्तर समीक्षाएँ।
अस्पताल "Krynica" - देश को सबै भन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट्स को छ। यसलाई पहिले केही समय स्थापित र स्पा उपचार को सबै भन्दा राम्रो परम्परा संरक्षण गर्न व्यवस्थित थियो। यो जलाशय Krynica को किनारमा मा स्थित छ। एक अद्वितीय चिकित्सा उपकरण छ जो यस आधुनिक र सहज स्वास्थ्य रिसोर्ट, आवासीय आवास राम्ररी कायम।
यो बहु-शास्त्रीय स्वास्थ्य केन्द्र, तर मुख्य निर्देशन - को जठरांत्रिय पर्चा को रोगहरु को उपचार। न्यानो प्रतिक्रियाहरू अस्पताल आधारमा पारित गरिएको छ जो उपचार को प्रभावकारिता शङ्का गर्न अनुमति छैन चिकित्सा कर्मचारी सम्बोधन गर्न।
6 गर्नुभएको अस्पताल "वन"
छोटो लेखको स्कोप एक विस्तृत समीक्षा गर्न अनुमति छैन, तर हामी बेलारुस केही थप रिसोर्ट्स हेर्न हुनेछ। समीक्षा सर्वश्रेष्ठ दर्जा आवश्यक नाम "वन" अन्तर्गत स्वास्थ्य रिसोर्ट समावेश गर्नुहोस्। यो परिदृश्य को अचम्मको सौन्दर्य द्वारा प्रतिष्ठित छ। यो रिसोर्ट एक मिश्रित शंकुधारी-अनित्य जंगल मा ताल को किनारमा मा स्थित छ।
इलाका एक छ खनिज वसन्त, को संरचना अब देशमा कहीं छ को लाइक। यो रिसोर्ट restorative प्रोफाइल। साथै, आनन्द र सक्रिय नेतृत्व गर्ने मौका छ। शिकार र माछा मार्ने, पैदल यात्रा - यो सबै अस्पताल "वन" मा सम्भव छ। पर्यटकहरुका लागि विशेष यात्राहरु र मनोरञ्जन restorative प्रकृति संगठित। दैनिक विचरण तपाईं अस्पतालमा एक हेरविचार बिना खर्च अर्को वर्ष प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुनेछ र, त्यसैले।
स्विमिंग पूल संग सबै भन्दा रिसोर्ट्स, "लेकसाइड"
हामी पूल गर्न बेलारुस को दर्जा रिसोर्ट्स विभाजन गर्न र तिनीहरूलाई अलग विचार गर्ने निर्णय गरे। र सूचीमा पहिलो अस्पताल "लेकसाइड" छ। यो देश, मिन्स्क देखि 150 मी को एक अद्वितीय कुनामा स्थित छ। वरिपरि प्रभुत्व पाइन वन। यी अक्सर हृदय र भास्कुलर रोग उपचार गर्न आउँछन्। समीक्षा चिकित्सा उत्कृष्ट परिणाम प्रदान गर्दछ भन्छन्। उच्च रक्तचाप र tachycardia, लामो समय फिर्ता र अस्पताल नियमित भ्रमणमा संग चिन्ता रोक्न। यस क्षेत्रमा - खनिज पानी पिउने कार्य खाई को दुई स्रोतहरु। gryazehranilischa रूपमा कार्य। यस क्षेत्रमा - एक विशाल भित्री स्विमिंग पूल तपाईं कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना पौडी खेल्न सक्छन् जहाँ।
र हामी सबै भन्दा राम्रो विचार गर्न जारी एक स्विमिंग पूल संग बेलारुस को रिसोर्ट्स। दर्जा जारी अस्पताल "Pinery"। यसलाई जो तपाईं सफा र ताजा हावा प्रदान गर्दै छन् मतलब एक वन, को बीचमा अवस्थित छ। शरीर अर्को पानी पार्क फोहराहरू र Cascades, नाजुक पुल छ। मात्र 55 किलोमिटर - मिन्स्क देखि दूरी।
को अस्पताल को प्रोफाइल - यो हृदय प्रणाली को रोगहरु को उपचार। समीक्षा द्वारा न्याय, एक अनुकूल वातावरण, चिकित्सा पेशेवरों र कर्मचारी द्वारा सिर्जना गरिएको छ जो त्यहाँ शासनकालमै। तपाईं आराम र आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
पानी खेल उत्साही लागि स्विमिंग लागि एक ठूलो पूल छ। कुल क्षेत्र - 50 वर्ग मीटर। एम। साथै, सना3वर्ग एउटा सानो पोखरी छ। एम। तर यो सना पछि शांत गर्न पर्याप्त छ।
हामी यो सुन्दर र सत्कार देश को सबै रिसोर्ट्स सूचीबद्ध छन्। तर, यो लेखको स्कोप अझ व्यापक समीक्षा लागि अनुमति छैन। तर हामी उल्लेख गर्न समय थियो सबै रिसोर्ट्स हरेक वर्ष न्यानो समीक्षा सयौं सङ्कलन उच्चतम दर्जा छ। तपाईं उपचार संग संयुक्त छुट्टीको, योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं बेलारुस हुनेछ। अद्वितीय जलवायु, सफा हावा, उत्कृष्ट रहन अवस्था - यो सबै पर्यटकहरु प्रत्येक वर्ष आकर्षित गर्छ। एक राम्रो बोनस मूल्य निर्धारण हुन्छ। यहाँ उपचार साथ बाँच्ने लागत युरोपेली रिसोर्ट्स भन्दा धेरै कम छ।
अस्पताल "र्याडोन", Liski, वोरोनिश क्षेत्र: बाँकी र उपचार
राबिन मेडिकल सेन्टर
Perinatal केन्द्र, बेलग्रेड: सेवाहरू, डाक्टर, समीक्षा
"Etamsylate" महिनावारी: आवेदन समीक्षा
विजेता Tolokonskiy: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्य
, BPH। के गर्ने?
पहेंलो चेरी प्लम को Tkemali - प्राचीन नुस्खा
इतिहास Kösem सुल्तान - शानदार जीवन शानदार महिला
एन्टिबायोटिक प्रवाह र मात्र
को elecampane को जरा - धेरै रोगबाट लागि उपाय
को VAZ-2106 मा "स्वर्गदूत आँखाहरु"। एलईडी "स्वर्गदूत आँखाहरु"
वैज्ञानिक तथ्य र अनपेक्षित परिकल्पना: चिनियाँ साँघुरो आँखा किन